HomeWararka Maanta“Yaan Lagu Heesin Magacayga” – Klopp Oo Farriin Cajiib Ah U Diray Taageereyaashiisa
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool, Jurgen Klopp ayaa farriin lala yaabay u diray taageereyaasha kooxdiisa ee caanka ku ah heesaha iyo qaylada ay ku garab taagan yihiin Liverpool.
Tababare Klopp oo warbaahinta la hadlay markii uu 4-1 kaga badiyey Leicester City, waxa uu ka dalbaday taageereyaasha kooxda Reds, in ay joojiyaan inay magaciisa ku heesaan inta ay socdaan ciyaaruhu, laakiin ay xor u yihiin marka ay dhamaato in siday doonaan ay ugu heesaan.
Klopp waxa uu tusaale u soo qaatay kulankii Arsenal oo ay taageereyaashu bilaabeen inay damaashaadaan, heestoodii caanka ahayd ee ‘You can never walk alone’ na ay ku dhufteen, magaciisana raaciyeen markii ay ciyaartu maraysay 4-1, ayaa ay Gunners goolal darran doori ah dhalisay, dirqina waxay Liverpool guushu ku raacday 4-3.
Isaga oo kulankan tusaale u soo qaadanaya, waxa uu Klopp yidhi: “Anigu sidan ayaan leeyahay, sababtoo ah ma garanayo wax kale oo aan idhaahdo. Fadlan ha ku heesina magacayga inta ciyaartu dhamaanayso!”
Isaga oo hadalkiisa sii wata, Klopp waxa uu yidhi: “Isla markii ay taageereyaasha Kop (Liverpool) bilaabeen heesta ‘Jurgen Klopp la la la’ waxa u caddaatay wixii helay Simon Mignolet (goolashii Argenal).”
Heesta inta aanay ciyaartu dhamaanin, waxa uu ku sifeeyey: “Heestoodu waxay la mid tahay, iyadoo loo damaashaaday rikoodhe aan wali la dhalinin.” Sidaas ayuu yidhi.
Los Angeles Dodgers vs Arizona D-Backs Highlights
Manchester City Oo Lacagtii Ugu Badnayd Abid Ku Iibsatay Aymeric Laporte